काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलमा सहभागिता जनाउने नेपाली टोलीलाई बिदाइ गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सफलताको शुभकामना दिएर नेपाली टोलीलाई बिदाइ गर्नुभयो ।
टोकियो ओलम्पिकमा पौडीमा गौरिका सिंह र एलेक्स शाह, एथलेटिक्समा सरस्वती चौधरी, सुटिङमा कल्पना परियार र जुडोमा सोनिया भट्टले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ । सिंह दोस्रो पटक ओलम्पिक खेल्न लाग्नुभएको हो । अन्य चार खेलाडी पहिलो पटक ओलम्पिकमा सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ ।
सिंहले पहिलो पटक सन् २०१६ मा रियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । नेपालमा आयोजित १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकूद (साग)मा सिंहले पौडीमा चार स्वर्ण, दुई रजत र तीन कांस्य पदक प्राप्त गर्नुभएको थियो । सिंहले महिला १०० सय मिटर फ्रि स्टाइल तथा शाहले पुरुष १०० मिटर फ्रि स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ ।
युफेईको चमत्कारीक प्रर्दशनले देशलाई स्वर्ण पदक जितायो
ओलम्पिकमा दाजु बहिनीले नै लिए स्वर्ण पदक
मुख्य प्रशिक्षकको राजीनामाले नयाँ तरङ्ग उत्पन्न, एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्षले दिए यस्तो बयान
ओलम्पिककी सबैभन्दा कान्छी प्रतिस्पर्धी को हुन् ? कति बर्षकी छिन् ?
भिसाकै कारण सन्दीप लामिछाने ‘द हन्ड्रेड’ खेल्नबाट वञ्‍चित, १ करोड गुमाए
फुटबल टोलीकी खेलाडी सावित्रा भण्डारीको घुँडाको सफल शल्यक्रिया
इंग्ल्याण्डलाई ३–२ ले हराउँदै इटाली यूरो कप फुटबल २०२० को च्याम्पियन बन्यो
LIVE : यूरो कपको फाइनलमा इङ्ल्याण्ड (१) – इटाली (०)
कोपा अमेरिका २०२१ : ब्राजिललाई हराउँदै २८ वर्षपछि अर्जेन्टिनाले उपाधि जित्यो
मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबद्वारा राहत वितरण